မေးခွန်း un souci avec P3D V4
7 လအတွင်း2weeks ago -7လအတွင်း2weeks ago #1434 by bobobo
Bonsoir bonjour à tous အူရား,
je viens က de Fair l'accisition က de "P3DV4 Professional က "etant donné Que j'en avait assez des" ဘာဂ်အထပ်ထပ်à "sur FSX, peut dir Que j'en galère lourdement ကားတစ်စီး la moitier က de mes Addon ne sont pas သဟဇာတ ... mais pas သင်ျခြိုငျးအပေါ် et ။
Donc je rencontre un souci un peut particulier ... et "Oui encore du PMDG!" ။ le PMDG 737 fonctionne မှန်ကန်သော, le QW787 également mais le ont pas က de souci mais PMDG 777-200 200LRF et တိုးချဲ့မှု 777-300, P3D ne fonctionne pas မှန်ကန်သော။
Donc ပေါင်း d'explication s'impose, vol type ကိုပဲရစ် - Réunion, lorsque je လှံ P3D va prendre T2G တွင် ( "OK ကို" est fonctionnel menu ကို accueil 'OK' ကိုရွေးချယ်ပါaéroport de ဦးစီးဌာနဆွဲဆောင်မှုရှိအောင် - LFPG လူဆိတ်ညံလျက် Les အစွမ်းက de Jetstream ဒီဇိုင်း LFPO mais la ဗားရှင်းလောင်း FSX n'est pas သဟဇာတ P3DV4 et ပေါင်း d'argent le ယခုအချိန်တွင်သွန်းလောင်း), အစီအစဉ်က de vol 'OK', AI အအသွားအလာ 'OK', ActiveSky 'OK', selection de l'ကိရိယာများအား "PMDG 777-300 AF" "အိုကေ" ။ et la c'est la ကပ်ဆိုးကြီး ... au lancement du vol "မရှိခြင်းက de Barre က de chargement!" ။ Rien ne se Pass, mais vraiment rien ။
Alor Que ဆွဲဆောင်မှုရှိအောင် Les autres အုပျတှဲ ce Pass Bien ဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်သွန်းလောင်း။ J'ai un "black window DE P3DV4! ", j'ai သြစတေး test avec au lancement un PMDG737 puis က de Chang d'ကိရိယာများအား mais ... rien, Rien, RIEN! Toujours ce က Black ကို Windows က de un A330 က de BlackBox ခြင်း simulation အူရား P3DV4!
Donc j'ai ဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်désinstaller, et ပြန်လည် install ပြုလုပ်။ Contact PMDG ပံ့ပိုးမှု ... sa fait2semaines ။ Contact Prepar3D ထောက်ခံမှု ... ils m'ont ပေးအပ်ခြင်း un lien က de Mise တစ် jour mais rien y က fait toujours le meme soucis (il ont Notifier en passant qu'ils ont beaucoup က de soucis avec PMDG က de m'en dans la mesure du ဖြစ်နိုင် mais မဟုတ်တဲ့àလမ်း၌ရှောက် 120 € Les addons မသနားတျောမူ mais je veux en အမြတ်), donc je ငါ့ကို tourne vers la communauté။
က Les မေးခွန်းများကို:
_Quels sont Les ဖြစ်နိုင်သောက de ce soucis ဖြစ်ပေါ်စေသည်?
_Bien le régléမှတ်ချက်ပေးရန် Sur?
il Que seul Les PMDG 777 sont ထိခိုက်စေ et pas Les autres t ကိုမှတ်ချက် cela ce fait?
Plus အား d'အင်ဖို sur le PC ကို et P3DV4
Processeur AMD ၏ Ryzen52600 (3.9Ghz)
P3DV4 Professional ကà jour
BlackBox ခြင်း simulation A330 A340 စကားချီး
FSDG: မောရစ်ရှ, Réunion, မာယော့တ်
JetStream ဒီဇိုင်း: Nantes
အပူပိုင်း Sim: မာတီနစ်
Flightbeam စတူဒီယို: ဆန်ဖရန်စစ္စကို
je Tien à remercier ceux qui auront déjà pris le ceux qui vont pourvoir m'aidé, က de Lire မွန် post ကို temps ။ et je Tien အတိအကျ Que ce n'est pas un BlackWindow က de c'est un က Black gauge က de PMDG (paie il အပေါ် Quand ya pas က de souci ... enfin ... ), P3D sans Barre က de chargement ။
ကရုဏာ, @plus Les voyageurs!
နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်:7လအတွင်း2လွန်ခဲ့တဲ့ရက်သတ္တပတ်များက bobobo.
0.171 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်